Iindaba-Imvelaphi kunye nembali yeeoyile ezifunekayo
I-China ngokwenene yimpucuko yakudala eyaqala ukusebenzisa izityalo ezinevumba elimnandi ukugcina impilo. Izityalo zazisetyenziswa kumaxesha akudala, zisebenzisa iimpawu zezityalo ukunyanga izifo, kunye nokutshisa isiqhumiso ukunceda ukuseka imvisiswano kunye nokulingana komzimba kunye nengqondo. .
Umlingo wendalo usinike umthombo oqhubekayo wobomi, kwaye ikwayisipho sendalo eluntwini, ukuze sihlale sonwabela ubuncwane obahlukeneyo obunika bona, kwaye ukutyala iioyile ezifanelekileyo zezinye zazo. Imbali yokusetyenziswa kweoyile ebalulekileyo kubalulekile kwimbali yempucuko yoluntu, kwaye imvelaphi yokwenene kunzima ukuyiqinisekisa. Ngokweengxelo zembali, ugqirha ongum-Arabhu wasebenzisa i-distillation ukuze akhuphe intyatyambo, neyenziwe ngeoyile eyimfuneko de kwaba lixesha lokukhula kweGrisi yamandulo. Kuyabonakala ukuba iincwadi zonyango ngelo xesha zazirekhodisha usetyenziso oluninzi lweeoyile ezifanelekileyo, nakwi-Egypt yamandulo ngaphambi kwe-5000 BC Umbingeleli omkhulu wakha wagcwalisa isidumbu ngentlaka yesonka ukwenza izidumbu. Unokuyicingela indlela ezazixabiseke ngayo ii-oyile ngelo xesha.
Kwiinkolo ezininzi zakudala okanye amaqela ezizwe, nokuba angaluhlobo luni na lomsitho okanye umbhiyozo, iziqholo ezahlukahlukeneyo ezikhutshwe kwizityalo bezisoloko zisetyenziselwa ukongeza ubungcwele kumsitho. Singafunda kwiintsomi ezininzi okanye kumabali ebhayibhile. Inokufumaneka kwiirekhodi.
Ngenkulungwane ye-13, iBologna School of Medicine edumileyo e-Italiya yenza iyeza lokubulala iintlungu elenziwe nge-oyile ezahlukeneyo, ezazisetyenziswa kakhulu kutyando. UHugo, owasungula lo myalelo, kuthiwa wayevela kwiSikolo sezoNyango saseBologna. UMseki.
Ngenkulungwane yeshumi elinesihlanu, uVerminis wasungula uhlobo "lwamanzi amangalisayo", emva koko umtshana wakhe wenza "uFanari Cologne" odumileyo. Olu hlobo lwecologne luye lwangqinwa lunefuthe lokubulala iintsholongwane, kwaye olu hlobo lwecolologne lwenziwe ngeoyile efanelekileyo yezityalo zeentyatyambo.
E-France ngenkulungwane ye-16, abanye abantu babeqhelene nokunxiba iigloves zesinongo esasine lavender kunye nemifuno eyahlukeneyo yalapha. Ngenxa yoko, abo banxibe iigloves zesinongo babekwazi ukumelana nezifo zobhubhane ngelo xesha. Oosomashishini abaninzi baqala ukugxila. Ukuveliswa kweoyile eyimfuneko yeziqholo. Olu hlobo lweoyile olufunekayo lwanceda amaGrike amelana nobhubhane. Ukusukela ngoko, iaromatherapy egxile kwioyile efunekayo itsala umdla wabaphengululi abaninzi kwaye ukusukela oko yasasazeka kwiindawo ezahlukeneyo. Ngokukodwa kule minyaka idlulileyo, i-aromatherapy inyuke ngokuthe chu. Fumana ingqalelo yehlabathi.
Namhlanje, iioyile eziyimfuneko zisetyenziswe ngokubanzi kuzo zonke iinkalo. Elona ziko liphambili lemveliso yeoyile eyimfuneko emhlabeni sisixeko samandulo saseGrasse kufutshane noMlambo iFrance. Ke ngoko, ngaphandle kwewayini, iFrance nayo inokuthathwa njengelizwe elingcwele leoyile eyimfuneko namhlanje.